Somunhu Premier Stainless simbi pamusoro mugadziri muna China, Foshan Hemesi (Hengmei) Steel Co., Ltd hwagadzwa muna 2006, iyo anoedza kuti Stainless simbi utsanzi uye unhu kwemakore anopfuura 10. Saka kure, isu zvave kuva guru Integrated zvebhizimisi kuti Stainless simbi zvinhu Magadzirirwo, kugadzira.
Zvino Hermes (Hengmei) Steel kuva mukurumbira wakanaka mune mijenya munyika.
India: Takatanga wedzerai India pamusika kubva makore 2010. Zvino tiri mukurumbira wakanaka Mumbai, Chennai uye Delhi, yakawanda vatengi vanosarudza Hermes unhu.
Middle East: With yedu nyanzvi pakutengeswa Chikwata kuitwa, ikozvino tiri kuunganidza dzakawanda vatengi. Vatengi vose dzakatobvuma akava shamwari Hermes Steel.
Mukuru ezvivako uye vagadziri rose kusarudza Hermes Steel sezvo akakodzera wokuroorana naye nokuda mabasa avo! Contact isu, rakajeka ndeyedu!